युक्रेनमा रहेका ४० जना नेपालीको परिवारले युक्रेन छोड्न चाहेनन्, यस्तो भन्छन् उनीहरु ! – Nepal Online Khabar
फागुण २०, २०७८ शुक्रबार 217
काठमाडौँ : रुस–युक्रेन द्व’न्द्वबाट प्रभावित भई युक्रेनबाट ५ सय ११ नेपाली सो देशबाट बाहिरिएका छन् । बाहिरिएका अधिकांश नेपालीहरु सुरक्षित स्थानमा पुगेका छन् ।
रुस–युक्रेन द्व’न्द्व प्रभा’वित नेपालीको सहयोग एवं उद्दार उच्चस्तरीय समितिको बैठकलाई बिहीवार साँझ सम्बोधन गर्दै जर्मनीका लागि नेपाली राजदुत रामकाजी खड्काले हालसम्म युक्रेनबाट नेपालीहरु सुरक्षित स्थानको खोजी गर्दै पोल्याण्ड,
स्लोभाकिया, हंगेरी, रोमानिया र माल्दावालगायतको देशमा पुगेको जानकारी दिएका हुन् । समितिका अनुसार हालसम्म ४ सय ३ जना पोल्याण्ड, ७१ जना स्लोभाकिया, २७ जना रोमानिया, ६ जना हंगेरी, र ४ माल्दावा पुगेका छन् ।
हालसम्म ५ सय ११ जना नेपालीहरु सुरक्षित गन्तन्यमा पुगेका छन् । युक्रेनबाट निस्केका मध्ये ४० जना नेपालीले यात्रा अनुमति पत्र (ट्राभल्स डकुमेन्ट) लिएको जर्मनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
समितिका संयोजक तथा एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीका अनुसार युक्रेनमा करिब ४० जनाको परिवारले आफ्नो व्यवसायसहित स्थायी बसोबास गर्दै आएकाले पारिवारीक र व्यवहारिक कारणले युक्रेन छोड्न नसक्नु भएको जानकारी दिए ।
Prevविप्लवसँग भेटेपछि भीम रावलले भने :- देशभक्तहरू एक हुनु राम्रो !
Nextकाँग्रेसले अब बहुमतका साथ ५ वर्ष आनन्दले सरकार चलाउँछ :- गगन थापा
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ३ लाख जनाको पिसिआर परीक्षण